Ramaphosa Sends Special Envoys To Zimbabwe - iHarare News
By Guest Author	 Last updated Aug 6, 2020 2 minute read
Last updated on August 6th, 2020 at 10:38 pm
South African president Cyril Ramaphosa has appointed envoys to Zimbabwe after an outcry over human rights violations linked to July 31.
The world was made aware of the human rights violations via the hashtag #ZimbabweanLivesMatter on Twitter.
In a notice, Ramaphosa’s office said South Africa’s president had appointed Dr. Sydney Mufamadi and Ms Baleka Mbete as his Special Envoys to Zimbabwe.
The two are expected to engage the Government of Zimbabwe and relevant stakeholders to identify possible ways in which South Africa can assist Zimbabwe.
The two are anticipated to leave for Zimbabwe as soon as all arrangements have been made.
Ramaphosa’s office said:
The appointment comes after the South African government announced Thursday that it had taken note of the human rights abuse reports occurring in Zimbabwe.
In a statement released on the official Twitter account, the government said its Minister of International Relations and Cooperation, Dr. Naledi Pandor was in contact with her Zimbabwean counterpart, Minister of Foreign Affairs and International Trade, Sibusiso Moyo.
ANC Secretary-General, Ace Magashule also confirmed that the ruling party had discussed the crisis in Zimbabwe.